Isimo sezulu eSochi - ngoFebruwari 2018: ukushisa kwamanzi, umoya, ukubikezela kusuka kwi-Hydrometeorological Center
Ungasebenzisa iholide ekhululekile eSochi nganoma yisiphi isikhathi sonyaka. Idolobha lokuphumula lihle kakhulu ukuhamba kahle, imihlangano nabangani. Isimo esifudumele eSochi ngoFebruwari 2018 sizoqala futhi siphele. Ngakho-ke, ngisho nasekupheleni kwebusika, idolobha lezokuvakasha lifanelekile ngokuhlelekile ekuhleleni konke okunye. Kubafundi bethu, sithole izibikezelo ezinembile zesimo sezulu ezivela kwi-Hydrometeorological Center. Idatha ekushiseni kwamanzi nomoya, imvula izokusiza ukukhetha isikhathi esihle kakhulu ngempelasonto, uhamba ngezinsuku zamasonto.
Isimo sezulu sizoba njani eSochi ngoFebruwari 2018 - izibikezelo eziqondile ezivela kwi-Hydrometeorological Center
Isevisi ye-Hydrometeorological Center ibikezela isimo sezulu esifudumele eSochi ngoFebruwari 2018. Ngesikhathi esifanayo, azikho izinguquko ezibukhali ekushiseni kwabakhamuzi kanye nezivakashi zomuzi. Ukunciphisa nokukhuphula kuyoba bushelelezi futhi kuzoba yizicucu ezimbalwa kuphela.
Isibikezelo sezulu seSochi wonke uFebruwari 2018 kusukela enkonzweni ye-Hydrometeorological Center
Ngokwesizinda se-Hydrometeorological Center, isilinganiso sokushisa kweFebruwari ngo-2018 edolobheni lezokuvakasha liyi-+9 degrees ntambama. Ebusuku, akunakwenzeka ukuthi kudlule + degrees +2. Izinsuku zemimoya eSochi zizoqashelwa kakhulu. Isivinini esiphezulu somoya sizoba ngu-5 m / s.
Isimo sezulu esinembile nokushisa kwamanzi eSochi ngoFebhuwari 2018 - idatha evela kubabikezeli besimo sezulu
NgoFebhuwari, amanzi eSochi ayofudumala kunjengoJanuwari. Ngaphezu kwalokho, nasemabhishi, izinga lokushisa emoyeni liyoba mnandi kakhulu, likuvumela ukuba uchithe kahle ukuhamba kahle. Ulwazi oluthe xaxa mayelana nokuthi kuzoba yisimo sezulu nesimo sokushisa kwamanzi ngoFebhuwari 2018 eSochi, ungakwazi ukubikezela okulandelayo.
Yisiphi isimo sokushisa sezulu nesimo samanzi esibikezelwe eSochi ngoFebhuwari 2018 izibikezelo sezulu?
Ukushisa okuvamile kwamanzi eSochi ngoFebruwari kuzoba ngu-+8 degrees. Ezinsukwini ezinzima kunazo zonke isibonakaliso sizokwehla ku-+5 degrees.
Isibikezelo sezulu esinqunyiwe ngoFebhuwari 2018 eSochi - idatha yokuqala nokuphela kwenyanga
Ukushisa okunamandla kulo lonke uFebruwari 2018 iSochi kuzovumela zonke izivakashi kanye nezakhamuzi zedolobha ukuba zichithe ukuhamba kahle. Kodwa udinga ukukhumbula ukuthi cishe isigamu senyanga isimo sezulu sizosakazwa. Ngakho-ke, ngaphambi kokukhetha isikhathi sokuphumula eSochi, kufanele ufunde ngokucacile isimo sezulu se-February 2018.
Izici zenguquko ngo-February sezulu ku-Sochi ngo-2018 ekuqaleni nasekupheleni kwenyanga
Ekuqaleni kwenyanga ababikezelayo bathembisa ukukhuphuka kwezinga lokushisa libe ngu-10 degrees. Izinsuku zokuqala zikaFebruwari eSochi zithembisa ukuthi zizoshiswa ngomoya ophansi. Kodwa phakathi nenyanga isimo sezulu singase sibi kakhulu, sizoqala ukuna. Ekupheleni kwenyanga, iSochi izophinde ifudumele. Noma kunjalo, ngesonto eledlule kungase kube nesimiso. Isimo sezulu saseFebhuwari esijabulisayo eSochi ikuvumela ukuthi uphumule kahle edolobheni lase resort yasebusika. Ngo-2018, izivakashi zayo kanye nezakhamuzi zilindele ukushisa okukhulu kwamanzi nomoya, inani elincane lemvula. Yiqiniso, ngokusho kwangaphambili kwezibikezelo zezulu, izinsuku ezinamafu zizoba cishe ingxenye yesithathu yenyanga. Ngokwe-Hydrometeorological Center, isimo sezulu esifudumele eSochi ngoFebruwari 2018 sizoqala futhi siphele. Ngakho-ke, ekuqaleni nasekupheleni kwenyanga, kungenzeka futhi kudingekile ukuba uye edolobheni lezokuvakasha ngisho nokuhamba nomndeni nabangane.
Ukuthokozisa okuhle nokuhlekisayo ngosuku lukaTatyana evesini nasenhlakeni
9 izindawo ezinhle zokuphumula eRussia
I-Palermo - imbali yedolobha laseTrrrhenian
Amaholidi asebenzayo ngamaholide omnyaka omusha
Umlando weMinoan: Crete - isiqhingi seZeyus ne-Minotaur
Iwundlu elimnandi elinemifino nemifula
Isaladi lelayisi ngezinhliziyo nezithelo
Ingulube yezinkukhu ne-tomato sauce
Gwema isisindo ngesonto u-3-5 kg ​​wokudla
Okwenza abesifazane bafune ukushada
Yini ngempela eqinisa ubuhlobo?
Yeka ukuthi ungafaki kanjani uthando zibe yisifo
Ши дши C C C Cшиши Cшиши C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
I-punch ye-ginger yaseTropical
Uphaya ngezinhlanzi ezinamathanga
Ungayifuni kanjani ukucabanga abantu?
Iqhwa eliyigugu: izinto ezintsha zeqoqo le-SOKOLOV ebusika